नेपाली युवाको पहलमा ‘मुत्थुट फाइनेन्स’ ब्रान्डको स्पर्श विश्वको शिखर सगरमाथामा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाली युवाको पहलमा ‘मुत्थुट फाइनेन्स’ ब्रान्डको स्पर्श विश्वको शिखर सगरमाथामा
नयाँ दिल्ली, भारत । भारतमा नगद पूँजीको आवश्यकता परेको खण्डमा सुन धरौटी राखी नगद ऋण उपलब्धता गराउने नम्बर १ विश्वसनीय वित्तीय ब्राण्डका (गोल्ड फाइनान्सिंग) रुपमा चिनिएको छ मुत्थुट फाइनान्स कम्पनी।
विश्वभरि करिब पच्चीस हजार बढी रोजगार दिएको मुत्थुट फाइनान्स संस्थाले लगभग विश्व भरी आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेको छ।
मुत्थुट ग्रुपले आफ्ना ग्राहकको सुविधाका लागि विभिन्न किसिमका सेवाहरु उपलब्ध गरएको छ। गोल्ड लोन, मनी ट्रांसफर, विदेशी मुद्रा, हाउसिंग फाइनान्स, बिमा, एटीएम, म्युचुअल फन्ड जस्ता ग्राहक सुविधा रहेका छन्।
करिब तीन वर्ष पहिला मुत्थुट फाइनान्स (रेमिट्यान्स विभाग) भारतमा नेपालका लागि कन्ट्री प्रमुखको कार्यभार लिएका अनिल कार्कीले छोटो समयमा नै आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेका छन्।
अनिल कार्कीले मुत्थुट फाइनान्स ग्रुपलाई नेपाल लगायत विश्वमा कैयौं देशमा नयाँ आयाम दिनको निम्ति विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मुत्थुट ब्रान्डलाई स्पर्श गराउने सपना देखेका थिए।
आफ्नो यो सपना पुरा गर्नका निम्ति कार्कीले विश्व प्रसिद्ध प्रवतारोही फिलीप जेम्स क्रेम्टनको नेतृत्वमा गएको टोली द्वारा १९ दिन पहिला सफलताका साथ मुत्थुट ग्रुपको ब्यानरलाई सगरमाथामाको शिखरबाट विश्वलाई देखाउन सफल भएका हुन्। कार्कीद्वारा गरिएको यो कार्य मुत्थुट फाइनान्स ग्रुपका लागि ऐतिहासिक क्षण रहेको थियो।
सुन व्यवसाय र सुन कर्जा (गोल्ड लोन) सम्बन्धित सेवा दिने क्रममा मुत्थुट फाइनान्स ग्रुप भारतीयको बिचमा छूटै पहिचान बनाउन सफल भएको छ।
विगत दश वर्षमा विश्व वैश्वीकरणको परिवर्तनसंगै मुत्थुट ग्रुपले पनि आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्दै नेपालका निजी तथा राष्ट्रिय बैंकसंग सहकार्य गरी रेमिट्यान्स कारोबार सुचारू गरेको हो।
मुत्थुट फाइनान्स प्रवासमा कार्यरत नेपालीहरूका लागि सुरक्षित, सजिलो र समयमा नै नेपाली पूँजीलाई नेपाल स्थित परिवारसम्म हस्तान्तरण गर्ने एक भरपर्दो साधनको रुपमा परिचित छ।
भारत प्रवासमा अनिल कार्कीको नेतृत्वमा कम्पनीले प्रवासी नेपाली संघ संस्थाहरुलाई सांस्कृतिक तथा सूचनामुलक कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थितिका साथ वित्तीय सहयोग दिदै आएको छ।
मुत्थुट फाइनान्स ग्रुपले प्रवासी नेपालीहरुमा जागरूकताका लागि विभिन्न किसिमका नेपाली कार्यक्रममा आफ्नो प्रायोजकको भूमिका निभाउदै आएको छ। साथै अवैध तरिकाले गरिने आर्थिक कारोबार (हुण्डी) बापत नेपालीले भोग्नु पर्ने समस्याको जानकारी समेत दिने गरेको छ।
भारत प्रवासमा नेपालीहरुलाई पूँजी ट्रान्सफर अथवा ऋण सम्बन्धी जानकारीको आवश्यकता परेमा सम्पर्क गर्न सकिने बताइएको छ।